Banijya News | » समाचार समाचार – Banijya News
सङ्खुवासभाको निमार्णाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् गृहस्थलको काम बुधबारदेखि ठप्प भएको छ । सुरुङभित्र मजदूरको मृत्यु भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मजदूरले आयोजना स्थलका निर्माण सामग्रीमा तोडफोड गरेका थिए । अवरुद्ध भएको अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सञ्चालन गर्न...
जेठ १, काठमाडौंजनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएपछि जसपाको विवाद बाहिर छताछुल्ल भएको छ । शुक्रबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईपक्षले...
राप्रपाको महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्षत्रय सहितको आज बसेको बैठकले कोभिड–१९ महामारी भयावह बन्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै जेठ २२–२५ सम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।राप्रपाले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा उचित...
जिल्लामा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि संकट व्यवस्थापन समिति बाजुराले जारी गरेको निषेधाज्ञा जीप व्यवसायीहरूले उल्लंघन गरेको छन् । मार्तडी–कोल्टी चल्दै आएका जीपहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराको अनुमति नलिएर सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । निषेधाज्ञामा...
बजारमा दुई कम्पनीको ३३ लाख कित्ता माथिको आईपीओ निष्कासन हुने भएको छ । बजारमा दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी र मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उत्त आईपीओ निष्कासनको तयारी गरेका छन् । यस्को लागि दुबै सस्थाले निष्कासन अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा...
सुनसरी धरानस्थित सुर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भएका बेला सुर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन ‘तोक आदेश’ भएको...
Page 1 of 11771234Next ›Last »